घटेको हो त हास्य क्रेज ? - प्रसंग - साप्ताहिक
घटेको हो त हास्य क्रेज ?
कपिल शर्मा भारतका एक चर्चित हास्यकलाकार भए पनि सहकलाकारहरूसँग सम्बन्ध राम्रो राख्न नसक्दा विवादमा परे, जसको सीधा असर उनको द कपिल शर्मा शोमा पर्‍यो छ । भारतीय टेलिभिजनको टिआरपी अर्थात् टेलिभिजन रेटिङ प्वाइन्टस्मा निरन्तर एक नम्बरमा रहँदै आएको द कपिल शर्मा सो गत महिनाको टिआरपीमा चौध नम्बरमा पुगेको एनडिटिभीले बताएको छ ।
नेपाली टेलिभिजनमा पनि अचेल हास्य टेलिश्रृंखलाहरूको क्रेज घट्दो छ । सन्तोष पन्तले नेपाल टेलिभिजनबाट आजभोलिका कुरा र हिजोआजका कुराबाट बसालेको हास्य टेलिश्रृंखलाको जगमाथि घर बनाउने काम उनका चेला दिनेश डिसीले ट्वाक्क टुक्कबाट गरे । ट्वाक्क टुक्कबाटै करियर आरम्भ गरेर दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, दमन रुपाखेती आदिले त्यो घरलाई महल बनाए । दीपकराज गिरीको तीतो सत्य र जितु नेपालको जिरे खुर्सानीले कुनै बेला दर्शकहरूको अपार माया प्राप्त गरे । दीपक र जितु रातारात टेलिभिजन स्टार भए । त्यसपछि नेपाल टेलिभिजनमा हास्य श्रृंखलाको लहर नै चल्यो । केदार घिमिरे र सीताराम कट्टेलले मेरी बास्सै, कुमार कट्टेल र अर्जुन घिमिरे आदिले भद्रगोलबाट चर्चा बटुले । हास्य टेलिश्रृंखलाकै परिणाम, त्यसमा अभिनय गर्ने कलाकार आफ्नो वास्तविक नामले भन्दा पात्रको नामबाट प्रख्यात हुँदै गए ।
यस क्रममा जितुलाई मुन्द्रे, केदारलाई माग्ने बुढा, रवि डंगोललाई बेमान, सीताराम कट्टेललाई धुर्मुस, कुञ्जना घिमिरेलाई सुन्तु, कुमारलाई जिग्री ब्रो, विल्सन विक्रम राईलाई तक्मे बुढा, अर्जुनलाई पाँडे, बुद्धि तामाङलाई हैटका रूपमा चिन्न थालियो । उनीहरूले त्यही पात्रको नामबाट अहिलेसम्म पनि चर्चित छन् । कतिपय दर्शकलाई त उनीहरूको वास्तविक नाम पनि थाहा छैन ।
यसरी टेलिभिजनको पर्दामा चर्चित भएका कलाकारहरूको क्रेज अहिले पनि घटेको त छैन, तर टेलिभिजनमा भने त्यस्ता हास्य श्रृंखला हेर्ने लहरको भने लगभग अन्त्य भएको छ । कुनै बेला दर्शकहरूलाई साँझ परेपछि यो बार साढे सात बजे, साढे आठ बजे फलानो हास्य श्रृंखला आउँछ भनेर कण्ठै हुन्थ्यो । कुनै साता छुट्यो भने पनि ठूलै पाप गरे जस्तो अनुभव गर्थे दर्शकहरू । जताततै उनीहरूको नक्कल गरिरहेका मानिस तथा बालबालिका भेटिन्थे ।
टेलिभिजनबाटै राम्रो ख्याति कमाएका हरिवंश आचार्य, मदनदास श्रेष्ठ, सन्तोष पन्त अचेल टेलिभिजनको पर्दामा देखिन छाडिसके । महजोडी त यदाकदा विकासे टेलिचलचित्रमार्फत टेलिभिजनमा देखिन्छन्, सन्तोष पन्तलाई त नयाँ पुस्ताका कतिपयले चिन्दा पनि चिन्दैनन् । उनीहरूपछि चर्चामा आएका दिपकराज गिरीको करियर पनि टेलिभिजनबाट प्रारम्भ भएको हो, तर अहिले उनी टेलिभिजनका विज्ञापनमा मात्र बढी देखिन्छन् । दीपकको समूह अहिले हास्य श्रृंखला ‘तीतो सत्य’ बन्द गरेर चलचित्र निर्माण, अभिनय एवं चलचित्र व्यवसायमा बढी सक्रिय छ । विदेशमा हुने कार्यक्रमहरूमा प्रहसन देखाउन पुग्ने दीपक र दीपाको प्रहसन हेर्न अहिले गाईजात्रा नै पर्खनुपर्छ । गाईजात्रे कार्यक्रमलाई भने उनीहरूले निरन्तरता दिइरहेका छन् । मेरी बास्सैबाट ख्याति कमाएका केदार घिमिरे र विल्सनविक्रम राईले भने टेलिभिजनमा निरन्तरता दिनका लागि आफ्नै युट्युब च्यानलबाट हास्य श्रृंखला खासखुसको निर्माण गरि प्रसारण गरिरहेका छन्, जसलाई केही साता यता कान्तिपुर टेलिभिजनले पनि प्रसारण गर्न थालेको छ । केदार र विल्सन भने ती श्रृंखलाको निर्देशन सल्लाहकारमा सीमित छन् । उनीहरू खासखुसको सुरुवाती श्रृंखलामा आक्कलझुक्कल देखिए पनि पछिल्ला श्रृंखलामा भने देखिएका छैनन् । बीचमा लामोसमय स्वास्थ्य समस्याका कारण आराम गरिरहेका केदारले चलचित्रमा काम गर्न त भ्याए खासखुसमा काम गर्न भने भ्याएका छैनन् । बरु उनी अनलाइन प्रोडक्सन आमा अग्नि डटकमबाट खासखुस, गडबडी, खिचडी जस्ता हास्यश्रृंखलाहरू अपलोड गरिरहेका छन् । विल्सनविक्रम राईलाई तक्मेबुढाका रूपमा चिनाएको टेलिभिजनले नै हो, उनी पनि अचेल आफ्ना गुरु केदार घिमिरेले झै युट्युब च्यानलमा आफ्ना भिडियो क्लिप, म्युजिक भिडियो अपलोड गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे भूकम्पपछि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनमा व्यस्त छन् । अचेल उनीहरू टेलिभिजन तथा हास्य कार्यक्रमहरूमा कमै देखिन्छन् ।
पहिले विभिन्न टेलिभिजन च्यानलमा झण्डै दुई दर्जन हास्य श्रृंखला तथा कार्यक्रमहरू प्रसारण हुन्थे । अहिले घटेर आठ वटाजतिमा सीमित भएका छन् । दीपकराज गिरी भन्छन्– केही हदसम्म हास्य श्रृंखलाको क्रेज घटेको मान्न सकिन्छ, तर यसलाई टेलिभिजनमा हास्य क्रेज घटेको भन्दा पनि टेलिभिजनकै क्रेज घटेको भन्नु पर्ला । गिरीको भनाइ मान्ने हो भने टेलिभिजन हेर्ने दर्शक घटेका छन्, अझ भनौं नेपाली च्यानलहरूको टिआरपी घटेको छ । दर्शकहरू त्यही कार्यक्रम टेलिभिजनमा भन्दा युट्युबमा हेर्न रुचाउँछन् । पहिले जस्तो दर्शकहरू कुनै कार्यक्रमका लागि टेलिभिजन कुर्दैनन्, बरु युट्युबमा आइहाल्छ नि भनेर आफ्नो काम सकेर मन लागेको बेला युट्युबमा कार्यक्रम हेर्छन् ।
हुन पनि युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालका कारण टेलिभिजनको क्रेज घटेको छ तर हास्य कार्यक्रमहरूको माग अझै पनि छ । चाहे त्यो युट्युब च्यानलमै किन नहोस् ? युट्युबमा अपलोड गरिएका खासखुस, ट्वाक्कटुक्क रिटर्नस्, ट्वाकेन्द्र निवास, ह्वाट द फ्लप आदि हास्यश्रृंखला तथा कार्यक्रमले राम्रै भ्युज पाएको देखिन्छ ।
अहिले टेलिभिजनबाट उदाएका अनुहारहरू चलचित्रमा व्यस्त भएका छन् । चलचित्र छ एकान छबाट चलचित्र निर्माणमा हात हालेका दिपकराज गिरी, दिपाश्री निरौला, जितु नेपाल, केदार घिमिरे आदिले टेलिभिजन लगभग छाडिसकेको अवस्था छ भने अरु पनि केही हास्य कलाकार टेलिभिजनमा देखिन छाडिसके । टेलिभिजनबाट संगालेको हास्य क्रेजलाई चलचित्रको पर्दामा देखाएर दीपक, दीपा, जितु, केदार आदिले फाइदा त बटुलेका छन्, तर कहिलेसम्म ?
जितु नेपाल भन्छन्– नेपालमा रहेका सरकारी वा प्राइभेट कुनै पनि टेलिभिजन च्यालनले दर्शकहरूले मनोरञ्जन खोज्छन् भनेर सोचेकै पाइँदैन । सबैले राजनीतिक समाचार र गतिविधिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा व्यवसायिक टेलिभिजनको कमी छ र भएकाहरूले पनि हास्यविधालाई त्यति वास्ता गरिरहेका छैनन् । सिमित बजेट दिएर कार्यक्रम तयार पार्न भनिन्छ, अनि स्तरीय भएन भनेर पनि उनीहरू नै भन्छन् । इसकुस पकाउन लगाएर त्यसमा मासुको स्वाद त खोज्नु भएन नि ।
अहिलेका चल्तीका हास्यकलाकारहरूका गुरु मानिएका सञ्चारकर्मी, चलचित्र निर्देशक तथा अभिनेता दिनेश डिसी हास्य श्रृंखलाको क्रेज घट्नुलाई जबरजस्ती थोपरिएको हास्य प्रस्तुतिलाई मूल कारक मान्छन् । दिनेश भन्छन्– जस्तो पायो त्यस्ततो हास्य सामाग्रीबाट दर्शकको मन जित्न सकिँदैन । सबैभन्दा पहिले हास्य कार्यक्रम तथा श्रृंखला निर्माता एवं निर्देशकहरूले आफुले कुन वर्गका लागि के निर्माण गरिरहेको छु ? भन्ने हेक्का हुनुपर्छ । डिसीका अनुसार हास्यश्रृंखला तथा कार्यक्रमहरूको वर्ग आफैले निर्धारण गर्नुपर्छ । कुन वर्गका दर्शकका लागि भन्ने नछुट्टयाइएका कारण पनि हास्य कार्यक्रमको क्रेज घटेको हो ।
चलचित्रमा हास्यकलाकारहरूको आगमन र हास्य बिषयमा चलचित्र बन्नुलाई दिनेश डिसी राम्रो मान्छन् र सँगसँगै भन्छन्– मनोरञ्जनमा संसारभर नै हास्य विधा सर्वाधिक आम्दानीको श्रोत मानिन्छ । राम्रो र स्तरिय हास्य चलचित्र निर्माण भएको खण्डमा त्यसले दर्शकको राम्रो साथ प्राप्त गर्न सक्छ । ५० लाख– एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि खर्च गरेर हास्य विषयमा चलचित्र निर्माण गर्नु ‘रिस्क’ हो । दिपक–दिपाले त्यो रिस्क उठाए र दर्शकको मन पनि जिते । सबैले त्यसो गर्न सक्दैनन् ।
टेलिभिजनमा हास्यविधा अस्ताएको होइन, स्तरीय र दर्शकको मन जित्ने हास्य कार्यक्रम वा श्रृंखला प्रसारण हुँदा दर्शकले साथ अवश्य पाइन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा सन्दिप क्षेत्रीलाई लिन सकिन्छ । क्षेत्री आफ्नो कार्यक्रम ह्वाट द फ्लपका कारण चर्चामा छन् र त्यही कार्यक्रमले गर्दा उनी देशविदेशका कार्यक्रममा व्यस्त छन् । चर्चामा आउन फरक र नौलो ढंगको कार्यक्रमको आवश्यकता हुन्छ जसका लागि राम्रो बजेट चाहिन्छ । त्यही बजेटको अभावका कारण पनि टेलिभिजनमा स्तरीय हास्य कार्यक्रमको अभाव खड्किएको हो ।
हिरो बने हैट
इन्स्टा लभर्स अभिनेत्री भाद्र १६, २०७४